10 Iindawo zokutyela eziGqwesileyo kwihlabathi | Gcina A Isitimela
ekhaya > Iindawo ezinika umdla Tips > 10 Iindawo zokutyela eziGqwesileyo kwihlabathi
Qeqesha ukuhamba iBritane, Uloliwe kuhambo Italy, Qeqesha uKhenketho e-UK, Iindawo ezinika umdla Tips
(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 30/07/2021)
Xa usiva i-steakhouse yekota, kwangoko uya kucinga nokuba yi-US okanye i-Yurophu. kunjalo, ayizizo kuphela iindawo zokukhulisa iinkomo kunye nokutya inyama yenyama. UWagyu noKobe, Ezithathwa njengezona zisikiweyo zibalaseleyo kwihlabathi, ivela eJapan. Ngaphezu, Iindawo ezinjengePortugal neArgentina zifanelwe kukukhankanywa.
Iinkomo ezityiswa ingca zommandla othile ziya kuba nencasa emnandi ekhethekileyo kuloo mmandla uthile. Naxa sekuthethiwe oku, ukusikwa okumnandi kwe-steak kukukhetha ukuya kuninzi lwabathandi benyama. Silukhethile olu luhlu lwee 10 Iindawo zokutyela eziGqwesileyo kwihlabathi, ekufuneka ikwifayile yakho bucket uluhlu ukuba i-steak yenye yokutya okuthandayo.
1. Igood Steakhouse, London
Phakathi kwezona ndawo zibalaseleyo zokuhlala emhlabeni, UGoodman ngowaseNew York. UGoodman wavula isebe laseLondon 2008, kwaye i-franchise iye yanda yaya kwiindawo ezintathu ukusukela oko.
Indawo yokutyela inikwe i-Star ye-Michelin kwaye iyathandwa ngabaxhasi bayo ngenxa yesikhumba sayo kunye neempawu zomthi ezilinganisa i-New York vibe. Abathengi bafumana ukhetho lokukhetha eSpain, UK, okanye ukusika kwe-US. Indawo yokutyela idala inyama yayo kwindawo kwaye iyazingca ngembambo yamehlo.
2. Indlu yesiteki kaMancy, IToledo
Indlu yesiteki kaMancy eToledo, IOhio, yenye yamaziko odumileyo. Indawo yokugcina inyama yasekwa ngo 1921 yaye, ukuba abantu basekuhlaleni bayakholelwa, iyaqhubeka ukupakishwa ukusukela ngala mhla 1, nangosuku lweveki. Kuyacetyiswa ukuba ujonge Imozulu yemozulu yaseToledo ngaphambi kokuphuma phaya kuba kungafuneka ulinde kancinci ukuze ungene.
Eyona ilungele ukukhetha usuku xa imozulu eToledo imnandi, nokulinda ngaphandle kuyakonyusa ulindelo lwento eyenzelwe wena ngaphakathi, sukukunyanzela ukuba ubuyele kwenye indawo. I-steakhouse kaMancy isebenza kwi-Angda eqinisekisiweyo ye-USDA, kunye neAngus Prime Steaks esele ikhulile kwaye ixhelwe esizeni. Amaxesha onke afunga ngokutya kwaselwandle apha, ngakumbi i-Alaskan King Crab kunye ne-Australia Lobster.
3. Sika ngoWolfgang Puck, Singapho
UWolfgang Puck akadingi kwaziswa. Umpheki kunye nomcebisi odumileyo waseMelika wase-Austrian wavula indawo yakhe yokutyela yokuqala yaseAsia ebizwa SIKA eMarina Bay Sands, Singapho , ngo 2010. Ukusukela oko ubukhosi be-CUT bukwandisile kwihlabathi jikelele, kodwa isebe laseSingapore liyaqhubeka lihamba phambili.
Abaxhasi banokonwabela udidi lwehlabathi lweKobe, 300-I-Angus eyondliwe ngosuku, okanye iA5 Wagyu. Ubungcali beli ziko luluhlu lwasendlini ngaphakathi kunye nengqokelela yewayini ebanzi eqhubeka kakuhle nakuphi na ukusikwa kwe-steak.
4. Aragawa, Tokyo, Japhan
I-Aragawa eTokyo yenye yezona ndawo zibiza kakhulu kwihlabathi. Indawo yokutyela eneenkwenkwezi eMicrosoft yaziwa ngokuba ngumpheki wayo – Yamada Jiro, okhonza kuphela inyama yenkomo yaseKobe efanelekileyo kwihlabathi.
I-USP yale ndawo yokutyela kukuba iphakamisa umhlambi wayo weenkomo zeTajima ezicocekileyo okoko yavula 1967. Ulawulo olukumgangatho ophezulu kunye nokhetho olukhethiweyo lwepakethi enikezelwayo lwenza iAragawa ibe yindawo yokutyela etofotofo.
5. UPeter Luger, Inew York
Ishishini eliqhutywa lusapho liyazingca kwi-USDA yayo ephambili yokuqinisekiswa kwenkomo. Bangenisa eyona nyama intle evela kumbindi-mpuma kunye nobudala obomileyo kuyo. Le yokutyela eneenkwenkwezi eMicrosoft ikwayindawo endala, isekiwe kwi 1887.
Indawo ithathwa njenge icon yendawo yokutyela yesiXeko saseNew York kunye nesiko lokuhamba ngabantu abaninzi. IPorterhouse steak, abaneminyaka eyomileyo kwindawo ye 28 iintsuku, Isitya esinconywayo ecaleni kweetapile eziqhotsiweyo zaseJamani kunye neesosi zangaphakathi.
6. UAntica Osteria Nandone, Tuscany
Ukuqhutywa nguPaolo Mugnai eTuscany, iAntica Osteria yavula iingcango zayo 2007 kwaye ine-rustic, Ihlabathi elidala livakalelwa ngamava okutya okuqala. Indawo yokutyela yaziwa ngokuba yiBistecca Alla Fiorentina, I-steak yaseNtaliyane eyenziwe nge-veal okanye ithokazi lenkomo kunye nesitya esibalulekileyo kwisitya saseTuscan.
Ukuqaqanjelwa kwamava okutyela eAntica Osteria ngumpheki olungiselela inyama-yenyama phambi kwakho ungasebenzisi nto ngaphandle kweoyile yeTuscan kunye netyuwa elwandle.
7. Ibha yeGibsons & Indlu yesiteki, Chicago
EChicago, I-Bar yeGibons kunye ne-Steakhouse iyazingca ngokuba yindawo yokuqala yokutyela kweli lizwe ukufumana eyayo Isiqinisekiso se-USDA ye-Prime Angus yenkomo.
Indawo yokutyela yaziwa ngokuba ziinkomo zeBlack Angus, ukutya ingqolowa ye 120 iintsuku kwaye emva koko womile-ubudala kwindawo 40 iintsuku. Abahlali balapha eChicago bafunga ngeWR yaseChicago ukusika inyama, iitapile ezibhakwe kabini ecaleni, kunye neeGibons ezidumileyo zetyuwa.
8. Indawo yokuhlala, Rhawutini
IGrillhouse eRhawutini ithathwa njengeyona ndawo ibalaseleyo eMzantsi Afrika. Indlu yaseNew York yohlobo lwe-grill iyaziwa ngokukhonza i-fillet-crust fillet kunye neembambo ezigqwesileyo ezihamba kunye ne-premium single malts kunye iiwayini zalapha.
Le ndawo idume ngobambo lwayo olucothayo olucothayo, eyosiweyo kwilangatye eliphantsi ukusuka naphi na phakathi kwethoba ukuya kwi 12 iiyure. Olunye uhlobo lwendawo lubandakanya i-T-bone kunye ne-rump. Eyona nto ibeka le ndawo yokutyela ngaphandle yipremiyamu yenyama yenkomo kunye nabasebenzi beenkonzo ezigqwesileyo.
9. La Cabana, Buenos Aires, Ajentina
Njengoko besitshilo kwi-intro, IArgentina yenye yezona ndawo zingcono ukuvelisa inyama yenkomo yethenda kunye nejusi kunye nencasa ethile yommandla. ILa Cabana yenye yeendawo zokutyela ezidumileyo eBuenos Aires, ibekwe kwindawo ephambili yesixeko.
Indawo yokutyela ihambisa inyama yesidlo sakusasa, isidlo sasemini, nesidlo sangokuhlwa. Ezinye iingcebiso ezilula zibandakanya i-T-bone steak yazo, inyama yenkomo, ubambo lokuqala, kunye neembambo ezibhityileyo. Indawo yokutyela ikwabonelela ngengqokelela ebanzi yewayini entle yasekhaya yokuhamba kunye ne-steak yakho.
10. ICaprice, Leon, Speyin
El Capricho eLeon, Speyin, ithathwa njengohambo ngabathandi benyama kuba ishiye ngokupheleleyo imikhondo ebethiweyo, kude kwezona zidumileyo utsalo lwezotyelelo e Spain. Ifumaneka eLeon, U-El Capricho uqhutywa nguJose Gordon, umlondolozi, Umpheki, nomlimi.
Indawo yokutyela yaziwa ngokuba yinyama ekhuliswe kwiinkomo kunye neenkomo ezindala ezivela kwi-peninsula yaseIberia phakathi kweminyaka esixhenxe ukuya kwishumi elinesithathu.. Kanye ukuxhelwa, Inyama yenkomo yomile 160 iintsuku, ephezulu kakhulu kunesiqhelo. Abaxhasi banokuyonwabela i-T-bone, nditsho, okanye i-sirloin eyosiweyo kwimfezeko kwindawo evulekileyo yomlilo, idityaniswe neglasi yewayini egqwesileyo yendawo.
Oku kugqiba uluhlu lwethu oluphezulu lwehlabathi 10 eyona steakhouses. Ukuba ucinga ukuba ungumthandi wenyama, Yonke enye yezi kufuneka ibe kuluhlu lwakho lwamabhakethi.
Apha Gcina A Isitimela, singavuya ukukunceda ucwangcise uhambo lokuya e- 10 Iindawo zokutyela eziGqwesileyo kwihlabathi.
Ngaba ufuna ukufaka i-post yethu yeblogi "10 Best Steakhouses In the World" kwi sayithi yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fxh%2Fbest-steakhouses-world%2F- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
BestSteakhouses BestSteakhousesWorldwide ICarnivore MeatEaters Steak Indlu yesiteki
A part-time traveler and explorer who loves to share her experience in her writing. I believe in expressing my views firmly and standing by my actions - Unako cofa apha ukuze Nxibelelana noRebecca